Aerospace University Qaranka “Kharkov Aviation Machadka”
Aerospace University Qaranka “Kharkov Aviation Machadka” Details
gaabinta : sheegi
Ha iloobin in aad wada hadlaan University Qaranka Aerospace “Kharkov Aviation Machadka”
Codso in Jaamacadda Ummadda Aerospace “Kharkov Aviation Machadka”
Khai ayaa waxaa la aasaasay bishii 1930. Its taariikhda waxa ay xidhiidh dhow la horumarka ka jira injineerrada diyaaradaha iyo sayniska. Jaamacadda ayaa waxay caan ku tahay Abuurkiisa ee ugu horeysay ee diyaarad-xawaaraha sare ee Yurub la marsho ah mid gadaal loo soo degtey iyo abuurista design ee engine turbojet horumartay macalin of Khai A. M. Liulka kii ka dib noqday academician iyo naqshadeeye of qaabab badan ee matoorada diyaaradaha oo ay ku jiraan engine ee diyaaradda Su-27.
Khai waa hay'ad gaar ah oo sare waxbarasho halkaas oo diyaaradaha ee ay soo Design Machadka Burean iyada oo ay kormeerayaan professor waxaan. G. Neman waxaa laga soo saaray serially at dhirta diyaaradda oo ay maamulaan on diyaaradaha rakaabka.
From 1977 si ay u 1984 Designer Guud ee O.K. Antonov ordi waaxda dhismeedka diyaarad at Khai ah.
In 1978 Khai la siiyey magaca N. waxaad. Zhukovskiy. In 1980 Machadka waxaa la guddoonsiiyey amarka of Lenin. In 1998 N ah. waxaad. Zhukovskiy State Aerospace University "Kharkov Aviation Machadka" waxaa la aasaasay oo ku saleysan Khai iyo in 2000 Jaamacadda helay xaaladda a of hay'ad Qaranka tacliinta sare iyo helay magaca ah Aerospace Uuniversity Kharkiv Aviation Machadka Qaranka.
Inta lagu jiro mudada jiritaankeeda University ayaa tababaran oo ku saabsan 60 injineerada mareegtan. In ka badan 80% oo khaas ah oo la tacliinta sare ee ka shaqeeya degaanka aerospace Ukraine waa qalin of Khai ah.
Ugu ku saabsan joogo 9.5 ardayda mareegtan iyo 160 ardayda post-graduate waxaa loo tababaray Jaamacadda; 650 macalimiinta iyo 2.5 shaqeeyayaasha mareegtan halkan ka shaqeeya. Ka mid ah theme jiraan 120 Macalimiinta iyo Musharaxiinta of Science. Waxaa ka mid ah macallimiinta Jaamacadda waxaa kale oo jira: 1 USSR State Lenin Prize guuleystay, 7 Kooxda ku guuleysatay USSR State Prize, 28 Kooxda ku guuleysatay Ukraine State Prize, 11 USSR Golaha Wasiirada ku guuleysatay Prize.
Khai waa xubin ka mid ah Ururka Caalamiga ah ee Universitys; Global Association, Organization of Warshadaha iyo Airport Technology; sidoo kale waa in Catalogue Caalamiga ah iyo iska leh Association of hay'adaha waxbarashada sare ee magaalada Kharkiv INTERVUZ, iyo sidoo kale in ay Agency Aerospace ee Ukraine.
Khai waa co-fuliyaha barnaamijyada qaarkood kuwaas oo ay fuliyeen la jaamacadaha iyo shirkadaha of USA, Japan, Germany, France, Mexico oo qodi doono. Jaamacadda waxay qaadataa qayb barnaamijka abuurniinta ah "Alfa" saldhigga boos caalami ah.
In 1992 Khai ah dib u bilaabay tababarka ardayda ajaanibta ah 500 muwaadiniinta shisheeye ka 40 dalalka of Asia, Africa iyo America waxaa loo tababaray sanad walba Jaamacadda.
Khai waxay ka kooban tahay dhul u gaar ah oo magaalada aaga kaynta-qayb ka mid ah, meelaha ay ka dhigan tahay in oo ku saabsan 25 hektar. Jaamacadda waxay leedahay 8 dhismayaasha waxbarasho ee, machadka cilmi-baarista iyo laboratories, maktabadda doono 1 ml mugga in stock, campus, kakan hakaga, swimming pool, rugta preventurium ah ee gargaarka caafimaadka ee ugu horeeya, hoolalka cuntada, bangiga, carruurta beerta, iwm.
Taxanaha meelaynta ee Jaamacadda Ummadda Aerospace “Kharkov Aviation Machadka”
Wixii khuseeya University Qaranka Aerospace “Kharkov Aviation Machadka” ardayda ajinebiga ah u leeyihiin in ay codsan online via Center Admission Ukraine.
Accounting iyo hubinta
Diyaaradaha iyo gantaalada dhismaha
Matoorada iyo Quwadda diyaarad
dhismaha mashiinka Power
Heat injineernimada awood
Qalabaynta iyo teknoolajiyada computer-dhafan
Geodesy, cartography, urur ee isticmaalka dhulka
METROLOGY, jaango'an iyo shahaado
METROLOGY iyo macluumaad iyo teknoolojiga lagu qiyaaso
Ecology, deegaanka iyo maareynta dabeecadda isku dheeli tiran
cilmiga Computer ee
injineernimada Computer ee
cilmi badeecadaha iyo ganacsiga ganacsiga
Dhaqaalaha iyo credit
Khai ayaa waxaa la aasaasay bishii 1930. Its taariikhda waxa ay xidhiidh dhow la horumarka ka jira injineerrada diyaaradaha iyo sayniska. Jaamacadda waxay caan ku tahay Abuurkiisa ee ugu horeysay ee diyaarad Europehigh-xawaaraha la marsho ah mid gadaal loo soo degtey iyo abuurista design ee engine turbojet horumartay macalin of Khai A ee. M. Liulka kii ka dib noqday academician iyo naqshadeeye of qaabab badan ee matoorada diyaaradaha oo ay ku jiraan engine ee diyaaradda Su-27.
Khai waa hay'ad gaar ah oo sare waxbarasho halkaas oo diyaaradaha ee ay soo Design Machadka Bureau iyada oo ay kormeerayaan professor aan. G. Neman waxaa laga soo saaray serially at dhirta diyaaradda oo ay maamulaan on diyaaradaha rakaabka.
From 1977 si ay u 1984 Designer Guud ee O.K. Antonov orday waaxda dhismeedka diyaarad at Khai ah.
In 1978 Khai la siiyey magaca N. waxaad. Zhukovskiy. In 1980 Machadka waxaa la guddoonsiiyey amarka of Lenin. In 1998 N ah. waxaad. Zhukovskiy State Aerospace University "Kharkiv Aviation Machadka" waxaa la aasaasay oo ku saleysan Khai iyo in 2000 Jaamacadda helay xaaladda a of hay'ad Qaranka tacliinta sare iyo waxaa magacooda loo baxshay University Aerospace yaqaan Kharkiv Aviation Machadka Qaranka.
Ma rabtaa wada hadlaan University Qaranka Aerospace “Kharkov Aviation Machadka” ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Aerospace University Qaranka “Kharkov Aviation Machadka” on Map
Photos: Aerospace University Qaranka “Kharkov Aviation Machadka” rasmiga ah Facebook
Aerospace University Qaranka “Kharkov Aviation Machadka” dib u eegista
Ku biir si ay ugala hadlaan of University Qaranka Aerospace “Kharkov Aviation Machadka”.